प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रसंघको भूमिकाको प्रशंसा – Rajdhani Daily
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव अमिना जे मोहम्मदबीच बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शिष्टाचार भेट भएको छ ।
भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले यूएनको शान्ति अभियानमा नेपालले सन् १९५८ देखि नै योगदान गरिरहेको स्मरण गराए । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको विकास र समृद्धि निर्माणमा संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गरे । ‘राष्ट्रसंघको ७३औं महासभामा भाग लिने क्रममा पनि यस विषयमा महासचिवसँग विस्तृतमा कुराकानी भएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले भने, ‘नेपालको शान्ति, विकास र समृद्धिका लागि यूएनले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’
भेटका क्रममा उपमहासचिव मोहम्मदले नेपालले दिगो विकास लक्ष्य २०३० हासिलका लागि गरेको प्रयासको प्रशंसा गगरे । ‘नेपालको राजनीति दिगो विकास लक्ष्य हासिल प्राप्त गर्न सही बाटोतिर गइरहेको महसुस गरेका छौं,’ उपमहासचिब मोहम्मदलाई उधृत गर्दै डा. भट्टराईले भने, ‘नेपाल सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रमा आधारमा सहयोग गर्न तयार छौं ।’
Tags: राष्ट्रसंघको भूमिकाको प्रशंसा